Waa maxay aaladaha saadaasha hawadu? Maxay u yihiin | Saadaasha Shabakadda
Monica Sanchez | | La cusboonaysiiyay 05/04/2019 13:57 | Qalabka Saadaasha hawada
Haddii aad u jeceshahay saadaasha hawada, waxaad xaqiiqdii ka fekereysaa inaad iibsato mid ka mid ah qalabyada saadaasha hawada ee jira ama a Saldhigga Cimilada, run? Waxaa jira noocyo badan, laakiin waxaa jira qaar ka dhameystiran kuwa kale, waxayna kuxirantahay dhamaan qiimahooda. Xaqiiqdii, kuwa ugu qaalisan ayaa ah kuwa cabbiri kara isbeddelada cimilada badan iyo, sidaas darteed, kuwa ugu habboon kuwa doonaya inay si qoto dheer u ogaadaan cimilada ka jirta aaggooda, halka kuwa ugu jaban ay badan yihiin kuwa la jaan qaada. iyada oo la ogaanayo heerkulka la duubay inta lagu jiro maalinta oo laga yaabo in la ogaado huurka deegaanka.
Waxay kuxirantahay waxaad u isticmaali doontid, waxay noqon doontaa mid xiiso leh in la ogaado waa maxay noocyada qalabka saadaasha hawada ee jira iyo shaqooyinka mid kasta oo ka mid ahi leeyahay. Sidaa darteed, way kuu fududaan doontaa inaad doorato nooca kuugu habboon adiga.
1 Heerkulbeegga, waa mid ka mid ah aaladaha saadaasha hawada ee aan wada leenahay
1.1 Heerkulbeegga meerkuriga
1.2 Heerkulbeeg dijitaal ah
2 Qiyaasta roobka cimilada
2.1 Noocyada cabirrada saadaasha hawada
3.1 Noocyada hygrometers
Heerkulbeegga, waa mid ka mid ah aaladaha saadaasha hawada ee aan wada leenahay
Haddii ay tahay inaan doorano mid ka mid ah qalabka saadaasha hawada heer sare, dhammaanteen waxaan qaadaneynaa heerkulbeegga. Waa aaladda ugu isticmaalka badan sababta oo ah mahadsanidiisa waan garan karnaa heerkulka noocee ah ayaa la duubaa markaan eegno. Xitaa sidaas oo ay tahay, waxay u badan tahay inaad ka heli doonto qaar cabbiraya heerkulka ugu sarreeya oo keliya (inta u dhexeysa -31'5ºC iyo 51'5ºC) iyo kuwa kale oo keliya cabbira midka ugu yar (inta u dhexeysa -44'5ºC iyo 40'5ºC), inkasta oo tan ugu caansan ay tahay in labadaba lagu arko isla shaashadda saldhigga.
Waxaa jira noocyo badan oo heerkulbeegyada ah: gaas, iska caabin, kiliinik… laakiin meerkuri iyo kuwa dhijitaalka ah ayaa loo adeegsadaa saadaasha hawada.
Waa tuubo galaas xidhan oo meerkuri gudihiisa ku jirta. Muggiisa ayaa isbadalaya maadaama heer kulku sidoo kale isbadalayo. Qalabkan waxaa alifay Gabriel Fahrenheit sanadkii 1714.
Ugu casrisan. Waxay isticmaalaan aalado transducer (sida meerkuriga) oo markaa loo isticmaalo wareegyada elektarooniga ah si loogu beddelo kala duwanaanshaha danabyada yar yar ee laga helo tirooyinka. In sidan, heerkulka la duubay ayaa ka soo muuqan doona muuqaalka.
Qiyaasta roobka cimilada
Qalabkan saadaasha hawada cabbirayaa xaddiga biyaha ku dhacay aagga la dhigay. Millimitir kastaa wuxuu u taagan yahay hal litir, maalmaha aanu roobku joojinayn daadashada, waxaa aad loogu talinayaa in la hubiyo 4-6h kasta (iyadoo kuxiran xoogiisa iyo awooda cabirka roobkeena) si diiwaanka uu u noqdo mid sax ah suurtagal ah
Noocyada cabirrada saadaasha hawada
Waxaa jira laba nooc oo qiyaasaha roobka saadaasha hawada: Buug gacmeed iyo isugeyn.
Buugga: waa kuwa ugu raqiisan. Waxay yihiin si fudud weel silsilad ah oo ka samaysan caag inta badan midabkiisu cagaar yahay leh cabir qalin jabiyey oo lagu cabiro milimitir.
Taliyaaliyeyaasha: wadarta guud ee qiyaasaha roobka saadaasha hawada waxay hagaajineysaa saxnaanta, maadaama ay ka kooban yihiin qori iyo hawl wade diiwaangeliya biyaha dhacaya 12 saacadoodba mar.
Hygrometer-ku wuxuu faa'iido badan u yeelan doonaa in la ogaado boqolkiiba qoyaanka hawada ku jira waxa ka jira deegaankeena. Natiijooyinka waxaa lagu muujiyey inta udhaxeysa 0 iyo 100%. Qaddarkani wuxuu metelaa boqolkiiba xaddiga uumiga biyaha ee ku jira hawada.
Qalabkan saadaasha hawada waxaa loo kala saaraa iyadoo loo eegayo inay yihiin kuwo analog ah ama kuwo dijitaal ah.
Analog: waxay u muuqdaan inay yihiin kuwo aad u saxsan, maadaama ay ogaadaan isbeddelada qoyaanka deegaanka isla markiiba. Laakiin mararka qaarkood waa inaad ku xisaabisaa iyaga, sidaa darteed badanaa ma iibiyaan wax badan.
digital: lambarradu sidoo kale waa sax, in kastoo xoogaa yar. Uma baahna wax dayactir ah, iyo sidoo kale waxay diyaar u yihiin inay adeegsadaan isla marka la iibsado ka dib.
Barometer-ku waa kaas cabiraa culeyska hawadu ka sarayso qolofka dhulka, kaas oo loo yaqaan magaca cadaadiska Hawada. Kii ugu horreeyay waxaa ikhtiraacay fiisikiska Torricelli sanadkii 1643 kadib markuu sameeyay tijaabo fudud:
Waxa ugu horreeyay ee uu sameeyay wuxuu ahaa inuu buuxiyo tuubo galaas ah oo meerkuri ah oo hal dhinac ka xirmay, wuxuuna ku rogay baaldi sidoo kale meerkuri ka buuxay. Arrin xiiso leh, tiirka meerkuriga ayaa hoos u dhacay dhowr sentimitir, taagan ilaa qiyaastii 76cm (760mm) dheer. Sidaas ayuu ku kacay milimitirka meerkuriga ama mmHg.
Laakiin weli waxaa jira wax kale: cadaadiska cimilada caadiga ah ee heerka badda waa 760mmHg, sidaas waxaad heli kartaa xogtan tixraac si aad u ogaato haddii cimiladu fiicnaanayso iyo in kale. Sidee? Aad u fudud. Haddii ay si xoog leh hoos ugu dhacdo waxaad ogaan doontaa in duufaanku soo dhowaanayo; Taas bedelkeeda, haddii ay si tartiib ah kor ugu kacdo, waxaad ku hayn kartaa dalladda kaydinta dhawr maalmood oo dheeri ah.
Thanks to aaladan saadaasha hawada waxaan ogaan karnaa xawaaraha dabaysha. Kuwa ugu badan ee la isticmaalo waa waxa loogu yeero muraayadaha indhaha. Waxay ku cabiraan xawaaraha km / h.
Markay dabayshu 'garaacdo' cirifka hoose, way rogmataa. Wareegyada ay bixineyso waxaa aqrinaya miiska ama lagu duubay warqad gogol ah haddii ay tahay anemograph.
Heliograph waa mid ka mid ah qalabka saadaasha hawada waxay noo ogolaaneysaa inaan cabirno waqtiga go'doonka. Waa in lagu hagaajiyaa iyadoo loo eegayo loolka juquraafi ahaan iyo iyadoo loo eegayo xilliga sannadka aad ku jirto, maadaama qorraxdu dhererkeedu ku kala duwan yahay sannadka markuu socdo.
Waxa ugu caansan waa Campbell-Stokes heliograph, oo ka kooban wareegga muraayadda u dhaqma sida muraayadaha isku soo dhacaya Marka falaaraha qorraxdu soo maraan, kaarka wax lagu duubo 'waa la gubay' waana garan karnaa saacadaha qorraxdu ay jirto maalintaas.
Nivometer-ka ayaa loo bartay cabir qadarka barafka dhacay xilli go'an. Waxaa jira laba nooc: laser, oo ay tahay in lagu tuuro dhulka si loo diiwaan geliyo, iyo acoustic taas oo ay ugu mahadcelinayaan qalabka wax qaata ee loo yaqaan 'ultrasonic wave transmitter-receiver', uma baahna inay la xiriiraan barafka.
Guud ahaan, rugta cimilada ee qaaliga ah, ayaa ka sii ballaadhan waxay noqon doontaa. Waxay kuxirantahay isticmaalka aad rabto inaad siiso, waxaa laga yaabaa inaysan muhiim ahayn inaad lacag badan kubixiso maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inaad la degto mid ka raqiisan. Iyo, liddi ku ah, haddii aad ogtahay inaad dooneysid inaad waxbadan ogaatid, ha ka waaban inaad aado oo aad soo iibsato mid, kaas oo laga yaabo inuu leeyahay qiimaha ugu sarreeya, laakiin hubaal waad ka sii raaxeysan kartaa wax badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Qalabka Saadaasha hawada » Qalabka saadaasha hawada iyo shaqadooda
sofia gonzales cad dijo
Tani sifiican ayey aniga ila socotaa maxaa yeelay iskuulka waan siineynaa waad mahadsantahay
Ku jawaab sofia claro gonzales
Aad ayaan u fiicanahay. mahadsanid
Ku soo jawaab mariangel
Waan ku faraxsanahay inay adiga waxtar kuu leedahay adiga, mariangel 🙂.
Waan jeclahay cimilada.
MA OGTAHAY QALABKA LOO ISTICMAALO IN LAGU QAADO JIHADA DAMBIYADA
Waa salaaman tahay Hannah.
Qalabka loo isticmaalo in lagu cabbiro jihada dabaysha ayaa ah hawo-mareenka.
i beddel ama waxay ahayd laydh taraafikada dijo
Sharaxaad wanaagsan ayaa wax badan ii adeegtay
Ka jawaab si aad iigu bedesho ama ay ahayd nal taraafikada
Waan ku faraxsanahay inay waxtar kuu ahayd. Salaan 🙂
xayndaab macluumaadkaas wanaagsan ee aan jeclahay 😀
Ku jawaab hector_duran
jidka agtiisa waa endometer-ka taasi waa I CAAWI !!!
Waa salaaman yahay Hector.
Waan ku faraxsanahay inay xiiso kuu ahayd.
Endometer-ka ma garanayo waxa uu yahay, waan ka xumahay. Waxaan baaray internetka si aan u arko haddii aan wax helay iyo wax muuqda; kaliya erayga endometrium, oo aan wax xiriir ah la lahayn cimilada (waa xuub daboolan aagga uu ilma-galeenku ku yaallo).
ok mahadsanid monica sanchez sidoo kale waxaan helay endrometrium-ka ama waa inay noqotaa inay xumeeyso laakiin mahadsanid iyo salaan aad uwanaagsan too
Waan ku salaamay 🙂
isa burgos dijo
Waad salaaman tahay, iga raali noqo, waxaan rabaa in aan wax ka ogaado anemocinemographer-ka ????
Jawaab isai burgos
Waa aalad iskudarsata muraayadda cimilada (si loo cabiro jihada dabaysha), anemometer (si loo cabbiro xawaaraha dabaysha), oo leh cutub dhexe oo farsameeya oo diiwaan geliya xogta
Salaan sidee tahay Waxaan hayaa weydiin aan weydiiyo. Ma runbaa in hygrometers-yo dijitaal ah lagu qiyaaso dhererka heerka badda? Tusaale ahaan, haddii aan 500 mitir ka sarreeyo heerka badda, akhrisku ma yahay in hygrometer uu i siin karo sax?
Aad baad ugu mahadsantahay horay!
Jawaab Juan Manuel
Salaan Juan Manuel.
Haa, runtii: Hygrometers dijitaal ah ayaa cabiraya cadaadiska Hawada.
hello monica waxay rabtay inay ogaato cimilada waa muhiim maxaa yeelay ??
Jawaab José Manuel Carrasco Nalvarte
Salaan José Manuel.
Saadaasha hawada waa muhiim maadaama ay noo ogolaaneyso inaan ogaano kala duwanaanshaha heerkulka, jihada iyo xawaaraha dabaysha, ifafaalaha saadaasha hawada ee kala duwan, iwm, iyo sida waxaas oo dhami u saameynayaan nidaamyada kala duwan ee deegaanka.
Waad salaaman tahay, waa maxay aaladda saadaasha hawada ee dusha sare ee dawannada dawan
Ku jawaab hhjhjhjh
macluumaad aad u fiican, oo loogu talagalay ragga, sida ku saabsan fiidiyowyada qaarkood, waxay noqon laheyd wax cajiib ah
Camila Dammaan dijo
Waan jeclaaday, aad baad u mahadsantahay, maadada aadka ufiican ayaa wax badan iga caawisay
Ku jawaab Camila damian
WAA SALAAM MAGACAYGA WAA CARLOS WAXAAN KA YIMAAHAY PERU WAXAAN RABAA IN AAD OGAATO HADDII AAD II CAAWIN KARTO INAAN DHISO QORAALKA SHIRKADA METEOROLOGY EE MEESHA AAN KU NOOLAHAY, INTA AAN OGAADO CIMILADA.
Waxaan ka imid Peru sidoo kale, salaan hadii aan caawin karo
Aad baad ugu mahadsantahay macluumaadka
Waa inaad cadeeysaa in 1 (hal) mm oo biyo dhacaya ay u dhigan tahay qadarka 1 (hal) litir oo biyo ah aag mitir laba jibbaaran (m2)
Jawaab Victor M Lopez B
Salaan maanta waxaan la bartay caruurtayda wax walba oo la xiriira saadaasha hawada
Mahadsanid, waxaan horey u heynaa waxa heerkulbeeg walba loo adeegsado
Jawaab francis alejandra lameda molleda
Aad ayaad u mahadsan tihiin in badan iyo in ka badan ayay ii adeegtay maxaa yeelay waxaan ku dhex aragnaa iskuulkeyga
Ku jawaab carlos daniel
Si aad ah ayey iigu socotaa aniga maxaa yeelay waxaan ku bixinaynaa dugsiga sare mana buuxinayo kaarka dijitaalka ah awoowgey IPad (kan) kaararkana waxaa la siiyaa berri sidaa darteed ma eegi karo maanta.
Aad baad u mahadsantahay iyo salaan qofkastoo soo dhigay.
Ku jawaab Celtuky
warkaan aad buu ii caawiyaa waayo bandhig ayaan sameeyay thanks ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Jawaab ilaa Abriil